March 2016 - Page 38 of 38 - iftineducation.com
iftineducation.com – Fannaanada cusub ee codka macaan ee facebook qabsatey Inaba Caadi Maaha rag badan ayaa u codeyay fanaanadaan codka macaan ee facebook isku soo caan bixisay rag badan ayey isla markiiba ku yeelatay oo taageeradeeda ah fans keeda wuxuu gaaraa hada 6 boqol kun oo likers ah waa yaabee ku dhahay waxayba ka shidantahay fanaaniinta runta ah ama heesaha dadoow…
iftineducation.com – Urka Afka ama waxa loo yaqaanno Af Quruxnka “Halitosis” waa xaalad qofku ka soo saarayo afkiisa hawo uraysa, taasoo ka duwan af-urka subaxii lala soo tooso, kaasoo ku baab’a nadiifinta ilkaha. Af- qurunka ma laha wax xuduud ah, umana kala soocno dadka da’dooda, noocooda iyo xaaladooda iyo dhaqaalaba, intaa waxaa sii dheer in af-qurunku u keeno qofka niyad jab…
iftineducation.com – Ganacsato waxaa jira mar haddii waxa ay damceen ay helayaan aan dan ka lahayn dadka iyo dalka. Dan aan ka lahayn sida iyo meesha ay ka helayaan heshiiska iyo cidda ay la gelayaan. Waxaa indho tiray damaca. Iftiinka keliya ee ay wax ku arkaan waa toosh ku shaqeeya bateri magaciisa la yiraahdo . Wax deeqaa ma jiraan dhimashada ka…
U GAAR AH RAGGA : Sidaan u dheelsii Maku iloobi doonto Abidkaa
iftineducation.com – In badan waxaan ka soo hadalnay naagaha meesha ay wax ka dareemaan jirkooda, dad badan ayaa na soo weydiiyay in aan ka hadalno nimanka meesha ay ka kacsadaan oo ay jecel yihiin.saan ognahay nimanka iyo naagaha waxaa u dhexeeya farqi weyn dhanka dareen waxaan kuu soo duuduubaynaa nimanka waxa ay ku kacsadaan iyo meelaha ay ka kacsadaan 1- aragtida…